Maxaan ka naqanna Ra’iisul Wasaaraha cusb ee Soomaaliya? | KEYDMEDIA ENGLISH
Maxaan ka naqanna Ra’iisul Wasaaraha cusb ee Soomaaliya?
Mr. Barre waa aqoonyahan iyo cilmi-baare, ka soo shaqeeyay machadyo cilmi-baaris oo kala duwan, oo ay ku jiraan Al-Shahid Center for Research and Media Studies (Somalia) iyo CPS, International Islamic University (Malaysia).
MUQDISHO, Soomaaliya – Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa Ra’iisul Wasaaraha 21-aad ee Dowladda Federaalka Soomaaliya u magacaabay Xamza Cabdi Barre, oo ka mid ah xubnaha Xisbiga Midowga Nabadda iyo Horumarka – UPD.
Xamza Cabdi Barre ayaa ka mid ahaa Xildhibaannada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka 11-aad ee JFS, wuxuuna ku fadhiyay kursiga HOP203, kaasoo 28-kii December 2021, lagu doortay magaalada Kismaayo ee caasimadda KMG ah ee Dowlad Goboleedka Jubbaland.
Ra’iisul Wasaare Hamza Abdi, waxa uu shahaadada BA ka qaatay Jaamacadda Sayniska iyo Tignoolajiyadda ee Yemen (2001), ka hor inta marqaatiga labaad ka diyaarin International Islamic University of Malaysia (2009), wuxuuna ka soo shaqeeyay waxbarashada.
Xamsa wuxuu hore u soo noqday Guddoomiyaha Guddiga Madaxa banaan ee doorashooyinka Jubaland (2019-2020); la-taliye sare oo ka tirsan Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Dowladda Federaalka (2015-2019), iyo la-taliye sare oo dhinaca maamulka ah Duqii Muqdisho (2014-2015).
RW Barre waxa uu sidoo kale soo noqday Xoghayihii hore ee Xisbiga Nabadda iyo Horumarka (PDP: 2011-2017, oo hadda ah Xisbiga Midowga Nabadda iyo Horumarka - UPD), oo uu hoggaamiyo Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa inta badan waqtigiisa u huray horumarinta bulshada gaar ahaan dhanka waxbarashada. Waa aas aasihii Jaamacadda Kismaayo, oo uu ka soo noqday guddoomiye ku xigeenka dhanka waxbarashada. Ra’iisul Wasaaruhu wuxuu kaloo soo noqday Ku-Xigeenka Diiwaangelinta Guud iyo Macallin Sare ee Jaamacadda Muqdisho.
Ra’iisul Wasaaruhu waa 48 jir ku dhashay kuna barbaaray magaalada Kismaayo, wuxuu aabe u yahay sidddeed carruur ah.
Xasan Sheekh, wuxuu markii ugu horreysay taariikhda xilka Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya u magacaabay qof ka soo jeeda beesha Ogaadeen.
Keydmedia Online ayaa hore u baahisay in marka laga qiyaas qaato, xilalka uu hore u magacaabay MW Xasan, uu RW-ruhu ka imaanayo kooxda ku xeeran Madaxweynaha.